तँ किन आत्महत्या गर्दै छस् ? - Tesro Ankha
तँ किन आत्महत्या गर्दै छस् ?
30246 पटक पढिएको
तँ मानवजीवनको अमूल्य अर्थ नबुझ्ने, समस्यासँग जुध्न नसक्ने संसारकै काँतर र तुच्छ मानिस होस् । र, त आत्महत्या गर्ने सोच तेरो दिमागमा आउँदै छ ।
संसारमा धेरै मानिस अपाङ्गता भएका दुव हात खुट्टा नभएका विभिन्न समस्यासँग जुध्दै अरूलाई हौसला दिएर शानसाथ बाँचेका छन् । कोठीमा बेचिएका बल्लतल्ल नरकीय जीवनबाट उम्किएर आफूलाई बेच्ने दलाललाई सजाय दिलाएर, त्यस्तै अरू महिलाको उद्धार गरेर शानसाथ बाँचेका छन् । भगवान्बाटै ठगिएका मानव अङ्ग काम नलाग्नेगरी बिग्रिएका (मुटु, कलेजो, मृगौला, किड्नी र कहिले निको नहुने रोगले ग्रसित) मानिस रात दिन भगवान्सँग रुँदै जीवनको भिख माग्दै छन् किनकि तिनीहरूले अमूल्य जीवनको मुल्य बुझेका छन् । तर, तँसँग के छैन र ? आत्महत्या गर्न खोज्दै छस् ?
्रजब तैंले आत्महत्या गर्नेछस्, तब तँ शव बन्नेछस् । मानिसले भन्नेछन्, ‘यसले केही गल्ती गरेको हुनुपर्छ । र त आत्महत्या गर्यो ।’ मान्छेको मनको लाखौं प्रश्नको बिल्ला भिरेर तँ जाँदै छस् । तैंले त्यसको जवाफ दिन सक्ने छैनस् किनकि त शव भइसकेको हुनेछस् । तेरो शव देखेर तेरो आमाबुवा आफन्त एकछिन रुनेछन् । भावुक बन्नेछन् । तँलाई सवश्रेठ मानव बनाएर यस संसारमा टेकाकोमा तेरो सृष्टिकर्तालाई अफसोस हुनेछ । अबउप्रान्त कहिले मानव चोला पाउने छैनस् ।
आमाले नौ महिना गर्भमा राखेर जन्माएर दस धारा दूध खुवाएर हुर्काएकोमा आत्माग्लानि गर्नेछिन् । तँजस्तो कुसन्तान जन्माउने कुचेशष्टा कहिल्यै गर्ने छैनन् । र भन्नेछन्, ‘गर्भमै तुईएको भए आज मलाई यो पीडा हुने थिएन ।’ तेरो बाबाले सानोमा बिरामी हुँदा ‘लोन’ लिएर हस्पिटल लगेर बचाएकोमा, मेलापात गरेर तँलाई हुर्काएकोमा अफसोस लाग्नेछ । बिस्तारै बिर्सेर जानेछन् । तेरो शव आगोले खरानी बनाउनेछ । तेरो याद यादमा सीमित रहनेछ ।
आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि हजार बार सोच । तँ जब आत्महत्या गर्नेछस् तेरो आत्मा भड्किनेछ । तेरो आत्माले कहिल्यै शान्ति पाउने छैन । किनकि तँ जवान छँदै आफ्नो सबै इच्छा मारेर पूरा नगरी आत्महत्या गर्दै छस् । तेरो आत्मा स्वर्ग जाने छैन । किनकि हत्यारा र पापी कहिले स्वार्ग जाँदैन
। तँ आफ्नै हत्या आफैं गर्दै छस् । तँ हत्यारा भएर मर्दै छस् । तेरो आत्मा अन्धकार र कहिले आगो र गन्धक ननिभ्ने भयानक डरलाग्दो नर्कमा जानेछ । नर्कको पीडा यति भयानक र डरलाग्दो हुनेछ्, यसको वर्णन गरेर गर्न सकिन्न ।
एकपटक सोच त तँसँग के छैन । यति सुन्दर अमूल्य जीवनलाई आगो र गन्धक ननिभ्ने अन्धकार नर्कमा धकेल्दै छस् । मानिसमा अभाव घटी कमी त सबैमा हुन्छ । सब कुराले पुगिसरी त कसलाई पो छ र ? राजामहाराजा, संसारको सबैभन्दा धनी मानिसलाई पनि पुगिसरी छैन । अहिले तैंले चिताएको काम बनेन होला, तैंले भनेजस्तो लाउन भनेजस्तो खान पाइनस् होला, सोचेजस्तो गर्न पाइनस् होला । आज गरिब होलास्, पीडित होलास्, भनेजस्तो तेरो परिवारले पुर्याउन सकेनन् होला । भनेजस्तो विषय लिएर कलेज पढ्न पाइनस् होला । समय सदा एकनास हुन्न । हेर एक दिन तैंले चिताएको सबै कुरा पूरा हुनेछ । त्यो दिन तेरो आउन बाँकी छ । अब्राहम लिङ्कनको जीवनी हेर, हरसमय असफल (असफलताबीचबाट गुज्रिएको पाइन्छ तर उनले कहिले हरेस खाएनन्) उनी विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न सफल भए । जीवन संघर्ष हो, आफूमाथि भरोसा गर्न सिक । एक दिन अवश्य सफल हुनेछस् । आज विदेशमा होलास् । काम गर्न गाह्रो होला । दुःख जुन दिन गर्यो, त्यही दिन मात्र हो । फेरि एक दिन आफ्नै देश फर्किनेछस् । आज दुःख गरेकाले भोलि तेरो भविष्यमा सुखी खुसी हुनेछस् ।
हेर, तेरो सृष्टिकर्ताले तँलाई कति सुन्दर र बहुमूल्य बनाएको छ । यो संसारमा तँजस्तो अनुहार भएको कोही जन्मेको छैन । न कसैसँग तेरो अनुहार मिल्छ । न त तेरो स्वर नै । तँ कति भाग्यमानी छस् । कति धेरै प्रेम पनि । तँलाई जाडो हुन्छ भनेर न्यानो घाम, तँलाई तिर्खा लाग्छ भनेर खोलानाला, झरना, राति अँधेरो हुन्छ भनेर आकाशमा जून, तँलाई संसारमा बोरिङ हुन्छ भनेर हरियाली वनजङ्गल, रंगबिरंंगी फूल । यी सबै तेरै खुसीका निम्ति हुन् । तँ नर्क होइन स्वर्ग गएको तेरो सृष्टिकर्ता देख्न चाहन्छ बाइबल । किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्।
युहन्ना आकाशमा हेर त ती चम्किरहेका लाखौं तारा सबै तेरा पुर्खा हुन् । जो आफ्नो आयुभरि बाँचेर स्वर्गमा छन् । तँ पनि आफ्नो आयुभरि बाँचेर त्यहीं जा । जहाँ सदासदाक लागि चम्किलो तारा बनेर चम्किरहनू ।
फेरि एकपटक सोच, तँ किन आत्महत्या गर्दै छस् ?
२०७४ मंसिर २ १९:०३